बार्सिलोनाको फराकिलो जित, रियल म्याड्रिडको हार - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
बार्सिलोनाको फराकिलो जित, रियल म्याड्रिडको हार
Published On : २७ बैशाख २०७५, बिहीबार ०७:५६
स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा रियल म्याड्रिड पराजित भएको छ भने बार्सिलोनाले फराकिलो जित हात पारेको छ।
रियल म्याड्रिड सेभियासँग ३-२ ले पराजित भएको हो। सेभियाका लागि विराम बेन येड्डर, मिगुएल लायुनले एक एक गोल गरे भने सर्जियो रामोसले एक गोल अात्मघाती उपहार दिए।
यस्तै राति नै भएको अर्को खेलमा बार्सिलोनाले भिल्लारियललाई ५-१ ले पराजित गरेको छ। बार्सिलोनाका लागि फिलिप कोउटिन्हो, पाउलिन्हो, लियोनल मेस्सीले एक एक तथा अोस्माने डेम्बेलेले दुर्इ गोल गरे। लिगका ३६ खेलमा अपराजित बार्सिलोनाले ९० अंक जोडेको छ।